११ वर्षदेखि अलपत्र राधेराधेको १७ तल्ले भवनको वास्तविकता (भिडियोसहित) | Kendrabindu Nepal Online News
२३ पुष २०७६, बुधबार १३:३७
भक्तपुरको राधेराधे चोकमा एउटा अग्लो भवन धेरै बर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । भवन अगाडिको हाइवेबाट हुँइकने गाडीमा सवार मानिस हुन् वा भवन वरपरका मानिस । सवैको एउटै जिज्ञासा हुने गर्छ, यति अग्लो भवन लामो समयदेखि किन बेवारिसे भयो ? यो प्रश्न सबैको मनमा उठ्ने गर्छ ।
धेरैले यो भवनलाई भारतीय अभिनेता गोविन्दा आहुजाको हो भन्ने ठान्छन् । तर मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठका अनुसार भवन निर्माण हुँदै गर्दा भवनका मालिकको आफन्त पर्ने भारतीय नायक गोविन्दालाई यो भवन अवलोकन गराएका थिए । त्यसैले पनि आम मानिसमा यो भवन भारतीय नायक गोविन्दाकै हो भन्ने भ्रम रहेको उनी बताउँछन् ।
यति ठूलो भवन किन बेवारिसे अवस्थामा छ भन्ने स्वाभाविक कौतुहल जाग्छ । रमाइलो कुरा के छ भने यो भवन सिनेमाको सुटिङमा समेत प्रयोग भइरहेको छ । विगतमा भारतीय नायक गोविन्दाले यो भवनको अवलोकन गर्नु र यही घरको दृश्य चलचित्रहरुमा पनि देखिनुले यो अग्लो भवन भारतीय नायक नायक गोविन्दा आहुजाकै हो भन्ने मानिसमा भ्रम पैदा भइरहेको हो । आखिर कसको हो त यो १७ तल्ले अग्लो भवन ?
सुरुमा विष्णु न्यौपानेको नाममा रहेको यो भवन र जग्गाको स्वामित्व अहिले शुभश्री जगदम्बा डेभलपर्सको स्वामित्वमा रहेको छ । डेभलपर्सका प्रमुख सञ्चालक अंकुर न्यौपाने, सञ्चालकहरू दिवश न्यौपाने र उत्सव न्यौपाने छन् । काठमाडौको तीनकुनेस्थित न्याैपाने टावर समेत यिनै न्यौपानेहरुको स्वामित्वमा छ । सुरुमा न्यौपानेको व्यक्तिगत नाममा रहेको यो भवन पछिल्लो समय नगरपालिकामा कागजात पेस गर्ने बेला भने संस्थाका नाममा पुगेको देखिन्छ । अहिले यो भवनको नक्सा पास गर्न निवेदन परेको छ ।
मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका अनुसार यो भवन २०६५/६६ सालमा पाँच तल्लाको नक्सा पास गरेर बनाइएको थियो । त्यति बेलासम्म नगरपालिकामा ५ तल्लाभन्दा अग्लो भवन बनाउन नपाइने व्यवस्था थियो । जब २०६७ मा नगरपालिकामा (फार सिष्टम) नयाँ नियम थपियो । त्यसपछि अग्ला भवन निर्माण गर्न पाइने भयो । त्यसपछि २०६७/६८ सालमा यो भवन १७ तल्ला निर्माण गर्ने गरी तयारी गरियो । २०६९ सालमा नयाँ नक्सा दर्ता गरियो । तर नक्सा पास हुनु अगावै भवन निर्माण सुरु गरियो । नक्सा पास गर्न नगरपालिकाले सर्जमिन गर्दा भवन अगाडिबाट ४ मिटरको बाटो टोलवासीलाई उपलब्ध गराउने भवनधनीले लिखित सहमति गरेका थिए । तर नगरपालिकामा पेस गरिएको नक्सामा भने पूरै जमिन ओेगटेर टोलवासीसँग गरिएको सहमती उल्लंघन गरिएको थियो । नगरपालिकाले टोलबासीसँग गरेको बाटोको सहमति अनुरूप मात्र भवन निर्माण गर्न निर्देशन दियो तर भवन बनिसकेको थियो । टोलवासीलाई एउटा सहमति र व्यवहारमा अर्कै नक्सा बनाएर घर अग्लो बनाएपछी नगरपालिकाले निर्माणकार्य रोक्न बाध्य भएको थियो ।
नगरपालिकाले ल्याएको नयाँ नियम अनुसार ‘फार’ मिलाउन भवनधनीले पछाडिको भागको जग्गा किनिसकेका छन् । मापदण्डभित्र पारेर नक्सा पास गराउन यतिवेला जग्गाधनी लागि परेका छन् । नगरपालिकाले पनि इन्जिनियर सहितको तीन सदस्यीय टोलीको एउटा समिति बनाई छानविन गरिरहेको छ । इन्जिनियर सत्यनारायण शाहको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । फार सिस्टमको मापदण्डभित्र पर्छ वा पर्दैन त्यसको अध्ययन भइरहेको समितिका संयोजक सत्यनारायण शाहले जानकारी दिए । नगरपालिका मेयर श्रेष्ठका अनुसार समितिको ठहरपछी मात्र भवन निर्माण सुचारु हुने वा भत्काउने भन्ने विषयको टुंगो लाग्नेछ । हेरौं यो भिडियोमा :
१७ तल्ले भवन, राधेराधेको
Prevचन्द समूहका नुवाकोट सेक्रेटरी पक्राउ
इरानमा विमान दुर्घटना भएको केहि बेरमै भूकम्पNext